Tuesday January 04, 2022 - 20:55:08 in Wararka by Xarunta Dhexe
Sannadkii dhammaaday ee 2021-ka waxaa marqaati laga noqday isbeddel aasaasi ah oo dhanka siyaasadda difaaca ah ee UK. Miisaaniyadda tignoolajiyada, sirdoonka casriga ah iyo internetka ayaa sii kordhaya. Laakiin miisaaniyada agabkii qaddiimiga iyo tir
Waxaas oo dhami waxay dhacayaan iyadoo ciidamada Ruushku ay isku urursanayaan xudduudaha Ukraine, Ruushku wuxuu dalbanayey in Nato ay ka baxdo qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ahaan jiray, Shiinaha ayaa si isa soo taraysa ugu baaqaya soo celinta Taiwan - mar kale haddii loo baahdo.
Marka hore, "dagaalka mustaqbalka" waxaaba la aaminsan yahay inuuba bilowday. Arrimo badan oo ku saabsan khilaafka weyn ee u dhexeeya Reer Galbeedka iyo laga yaabee Ruushka ama Shiinaha ayaa horey la isugu diyaariyey, amaba la dareemay.
"Waxa aanu joognaa xilli anaga - Maraykanka, Ingiriiska iyo xulafadayada - aanu ka soo baxayno 20-kii sano ee aanu la dagaalamaynay argagixisada, dagaaladii Ciraaq iyo Afgaanistaan, ayaa waxaanu markii aan madaxa kor u soo qaadnay kor ogaanay in aanu ku jirno xaalad adag." ayay tidhi.
"Markii aan diirada saarnay Bariga Dhexe," ayay yiri, "waddamadani waxay barteen xeeladaha dagaalka ee Reer Galbeedka. Waxayna bilaabeen inay si weyn u maalgashadaan tignoolajiyada cusub."
"Waxaan u maleynayaa in taasi ay ku dhici karto jawi aad degdeg u ah oo si weyn ugu tiirsan shabakadaha," Meia Nouwens, oo ah cilmi-baare ka tirsan Machadka Caalamiga ah ee Tababarka Istaraatiijiga (IISS) oo diiradda saaraya isticmaalka xogta Shiinaha ee isbadelka milatariga.
"Milateriga Shiinaha waxa ay abuureen ciidan cusub oo loo yaqaan Ciidanka Taageerada Istaraatiijiyadda kaas oo ka shaqeeya meelaha fog fog, dagaalka tiknoolajiyadda iyo awoodda internetka."
Hal arrin oo door weyn ka ciyaari karta dagaallada mustaqbalka waa sirdoonka casriga ah. Tani waxay si weyn u soo dedejin kartaa go'aan qaadashada iyo jawaabta taliyeyaasha, taasoo u oggolaanaysa inay si dhaqso ah u akhriyaan macluumaadka.
Tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee nidaamyada Mareykanka si wanaagsan uma dhicn. Hubkan yaalla bakhaarrada Shiinaha ayaa hadda Maraykanka ka dhigaya inuu laba jeer ka fikiro inuu dagaal galo si uu u ilaaliyo Taiwan haddii Shiinuhu go'aansado inuu ku duulo.
XIGASHADA SAWIRKA,GIANCARLO CASEM /